Ita chisarudzo chaicho NOW
- OR - SIGN UP WITH FACEBOOK SIGNZA NEGOGOG
Tora Iyo Yemahara YeMahara Uye Tora Kufarira Kunodzoka Kusvikira 24%
Tora mukana wedu wegumi Gumi Rokusimudzira, Gadzira XL + Akaunti uye ita mari yekuwedzera uchigara wakachengeteka pamba!
Unogona kuwana mari inosvika 24% kufarira anodzoka pakuenzana kwako kuwedzera purofiti yese unoita kubva zvako mabasa ekutengesa.
Uye kuti urambe uchibatana nguva dzose, tiri kupa FREE nharembozha yevatengi vedu vatengi vachangobva kuvhiya yavo XL + Akaunti. Kunyangwe waunoda apuro or Samsung, unogona kusarudza chinodiwa chishandiso chako!
Usamirira imwe miniti! Kutanga kuwana mihoro yekuwedzera nhasi!
VHUREI XL YANGU + ACCOUNT NZVO
Iripo mutengi? Login here
XL + Akaunti inowanikwa kune madhora muUS dollar yakagadzirwa nebhangi waya. Verenga mazwi akazara uye mamiriro ezvinhu
12 Zvikonzero pamwe Kusarudza FXCC Sokutengeserana Kwako Mutengesi
ECN STP Kuitwa
nokuda kweRetail client
kubva ku0.1 Pips
Kutanga uye EAs
Dzakarongedzwa & Kubvumirwa
pane XL Account
FXCC inoedza kupa vatsva uye vayo vashandi chaivo zvakasiyana-siyana zvekutsvaga zvipo. Zvinhu zvose zvakasikwa nekwereti mupfungwa, zvichibatsira kuwedzera ruzivo rwavo rwekutengesa.
Our basa rekutanga yakaramba iri dombo rakasimba; kupa zviyero zvisingatauriki zvehutengi hwebasa, zvinotungamirirwa ne: zviri nyore, zvakananga, zvakajeka uye zvakanaka zvebhizimisi zvigadzirwa, zvichiita kuti vatengi vedu vave nechepamusoro-soro rinokwanisa, kubva kune iyo inogona kuva vatengesi vanobudirira. Dzidzai mutsauko weFXCC, tangai nhoroondo ikozvino
Vhura yangu xl + account
Global Range Chekubhadhara Zvimwe na Kwete Dhipatimendi reMari
Inosanganiswa nemitemo, tsika dzetsika yekubhadhara mari; kuburikidza nekubhadhara kwebhangi, debit uye makadhi emakadhi, FXCC inopawo sarudzo isina kufanirwa yezvasarudzo kubva kumabasa edziviriro akachengeteka, akadai: China Union Pay, Netbanx Asia, Skrill, Neteller naBototo, vachinzi asi vashomanana. Zvose nzira dzokutumira dzine mazinga epamusoro ekuchengeteka kweprotocol akabatanidzwa, kuchengetedza kuchengeteka kwako uye zvakavanzika zvinodzivirirwa.
Wakagadzirira kukubatsira mune imwe nhanho yekutengesa kwako, 24h mutauro wemitauro yakawanda
kutsigirwa neVaDhauridzi veAkaunti dzeAkaunti.